တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ Korean Drama Actors 10ယောက်က ဘယ်သူတွေလဲ? - Chelmo News Portal
Home›knowledge›တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ Korean Drama Actors 10ယောက်က ဘယ်သူတွေလဲ?
ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်ကိုရရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသား(၁၀)ယောက်ကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်နဲ့ တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲတည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
(10) Seo In Guk
Seo In Guk ဟာလဲ ပရိတ်သတ်တွေချစ်ရတဲ့ ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ အဆိုတော်အနေနဲ့ဖြစ်ပေမယ့်လဲ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်မှာလဲ မခေသူလေးပါ။
(9) Nam Joo Hyuk
Nam Joo Hyukရဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာ မကျရူံးဖူးတဲ့ မိန်ကလေးပရိတ်သတ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ Modelအနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲက စတင်ဝင်ရောက်လာတာခဲ့တာပါ။ မတူကွဲပြားတဲ့ကာရိုက်တာတွေမှာ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကို ပိုမိုရရှိလာခဲ့တာပါ။
(8) So Ji Sub
လူပျိုကြီး Ji Subကတော့ Jeans Modelအနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “I’m Sorry, I love you” ဆိုတဲ့ Dramaကတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပရိတ်သတ်တွေအများကြီး ရရှိစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျ်ားဆန်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ရုပ်ရည်အပြင် သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် ထိပ်တန်းမင်းသား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
(7) Park Bo Gum
အပြုံးချိုချိုနဲ့ ချစ်စဖွယ်ရုပ်သွင်လေးကြောင့် နူတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ရူးရူးမူးမူးအားပေးခြင်းခံရတာကတော့ Bo Gumလေးပါ။ သူလေးကိုတော့ “Nation’s Crown Prince”လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ Gumရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်မှာတင် အားလုံးချစ်ရတဲ့ ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသားဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
(6)Kim Soo Hyun
ချောမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်အပြင် နွေးထွေးတဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး Kim Soo Hyunကိုလဲ ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်က ပရိတ်သတ်တွေက အားပေးချစ်ခင်လျက်ရှိပါတယ်။ အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံးရရှိတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသား တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(5) Lee Min Ho
Lee Min Ho ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကတော့ ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တင် မကပါဘူး အာရှတခွင်မှာပါ ပရိတ်သတ်အများအပြားရှိနေတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ “Boys Over Flowers”နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲကို စတင်ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(4) Ji Chang Wook
လိမ္မာပြီး မိဘကိုသိတတ်သူလေး Ji Chand Wookကလဲ ကိုရီးယားရဲ့ဈေးအမြင့်ဆုံးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်ပြောစရာမလိုအောင်ချောမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့အတူ ဘယ်ကာရိုက်တာကိုမဆိုပြောင်မြောက်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်လဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
Song Joong Kiကတော့ ကိုရီးယားတွင်သာမက အာရှတခွင်မှာပါ အောင်မြင်ကကျော်ကြားတဲ့ ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသား တစ်ယောက်ပါပဲ။ ကိုရီးယားသမိုင်းကြောင်းဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ “Sungkyunkwan Scandal”နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ စတင်သတိထားခဲ့မိတာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာအောင်မြင်မူရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ “Descendants of the Sun” ဖြစ်ပါတယ်။
Lee Jong Suk အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကတော့ Runway Model အနေနဲ့ပါ။ အသက်(၁၅)နှစ်ထဲက မော်ဒယ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပါရမီရှင်လေးပါ။ အခုဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုတသီတသန်းရရှိနေတဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
(1) Lee Joon Gi
မင်းသား၊ မော်ဒယ်၊ အဆိုတော်အဖြစ် ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ Lee Joon Giကလဲ ထူးခြားတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်ကို ရယူထားသူလေးပါ။ ကိုရီးယားရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ကြည့်လို့ အကောင်းဆုံး မင်းသားတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲငင်အားပြင်းတဲ့သူ့အကြည့်တွေ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ထိပ်တန်းမင်းသားအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေပါပြီ။